Khabiirka Horumarinta Xaafadaha (NIS / NSO) ee ku yaal St. Louis • DutchtownSTL.org
Khabiirka hagaajinta xaafada ayaa ah isku xirka deriska iyo adeeg bixiyaasha magaalada. Sidoo kale loo yaqaan Saraakiisha Xasilinta Xaafadaha, NISs, ama NSOs, Khabiirkaaga Horumarinta Xaafadaada ayaa ah qofka aad uxariirto arimaha ka socda xaafadaada.
Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha ayaa qeyb ka ah Magaalada St. Kooxda Xasilinta Xaafadaha. The NSTUjeeddada ayaa ah in la isu keeno bilayska, saraakiisha la soo doortay, hay'adaha dawladda, ururada adeegga bulshada, kooxaha bulshada, iyo shakhsiyaadka si loo ogaado xalka joogtada ah ee dhibaatooyinka socda.
Muxuu Sameeyaa Khabiirka Horumarinta Xaafadu?
Shaqada aasaasiga ah ee Takhasusayaasha Hormarinta Xaafaduhu waa inay noqdaan mushkilad xaliya. NIS-kaaga ayaa lashaqeeya wakaalado kala duwan oo magaalada ah si loo xaliyo arimaha loo gudbiyey CSB ama booliska.
NISs sidoo kale waxay si firfircoon u raadiyaan dhibaatooyinka ka imaan kara xaafadaada. NIS-kaaga ayaa ku jira waaxdaada maalin kasta isagoo raadinaya suuro galnimada xadgudubyada koodhka ama nashaadaadka rabshadaha sida qayilaadda joogtada ah ama daadinta sharci darrada ah Waxay sidoo kale xaqiijinayaan in la xaliyay arrimihii lagu soo wargeliyay Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta.
Khabiirkaaga Hormarinta Xaafadaada ayaa kormeera xaalada dhismayaasha banaan iyo guryaha dhibka leh. Mararka qaarkood waxay awoodaan inay la shaqeeyaan milkiilayaasha guryaha si wax looga qabto loona xaliyo arrimaha. Xaaladaha kale, NIS waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo dhisi lahaa kiisas suurtagal ah oo ka dhan ah milkiileyaasha guryahaas iyada oo soo saareysa xigashooyin iyo xareynta warbixinno.
Waxaad si joogto ah u arki doontaa NIS-kaaga oo kaqeybgalaya shirarka xaafadaha. Kulamada badankood, waxay bixin doonaan cusbooneysiin ku saabsan howlahooda socda waxayna ka jawaabi doonaan su'aalaha, waxay wax ka qaban doonaan waxyaabaha ay ka walaacsan yihiin, waxayna dhageysan doonaan fikradaha kale ee dadka deegaanka. Sababtoo ah NIS-kaaga ayaa ku jira qaybtaada oo si dhow ula shaqeynaya hay'adaha kale ee magaalada, waxay inta badan awoodi doonaan inay bixiyaan macluumaad si caddaalad ah u gaar ah marka la oggol yahay.
Goorma La Xiriirid Khabiirkaada Horumarinta Xaafadaada
Kordhinta Arimaha Adeegyada Magaalada
Inta badan arrimaha ku saabsan adeegyada magaalada, waxaad la xiriiri kartaa Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta (CSB). Laakiin arrimaha qaarkood waxay u baahan doonaan faragelin dheeri ah. NIS-kaaga ayaa kaa caawin kara markaad dhib kala kulanto inaad jawaab ku filan ka hesho Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta ama markay arrintaadu ka baxsan tahay baaxadda codsiga adeegga CSB ee caadiga ah.
Dad badan oo magaalada deggan ayaa deg deg ugu yeera Alderperson-kooda markay dareemaan in arimahooda aan si qancin looga hadlin. Badi wicitaanadaas waxay u badan tahay inay sifiican u maareeyaan Khabiirkaaga Horumarinta Xaafadu. Khabiirka Horumarinta Xaafaduhu waa boos joogto ah, NIS-yadu waxay haysaa qalab iyo ilo kaa caawinaya xalinta arintaada.
NIS-taadu waa xiriir toos ah oo ka dhexeeya adiga iyo adeeg bixiyaasha magaalada. Waxay leeyihiin awood balaaran oo ay kula socdaan dhibaatooyinka socda isla markaana ay usii wadaan la shaqeynta wakaaladaha magaalada si wax looga qabto arrimaha. Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha sidoo kale waxay si dhow ula shaqeeyaan Alderpersons ee xaafadahooda si ay midba midka kale ula socodsiiyaan arrimaha socda.
Khabiirrada Hormarinta Xaafadaha sidoo kale waxay u shaqeeyaan sidii xiriiriyaha ka dhexeeya dadka deggan magaalada iyo Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan'. Waxay si gaar ah ula shaqeeyaan si dhow SLMPDQaybta Guryaha ee Dhibaatooyinka. NIS-kaaga ayaa la shaqeyn kara booliska iyo hay'adaha kale si wax looga qabto guryaha rabshadaha wata.
Guryaha rabshadaha waa cinwaano hela wicitaano xad-dhaaf ah oo loogu talagalay adeegga bilayska, waxay leeyihiin cabashooyin xad-dhaaf ah oo xad-dhaaf ah, waxayna u keenaan dhibaatooyin kale oo socda xaafadda ku hareeraysan. Guri laga shakisan yahay ka ganacsiga daroogada, ganacsi umuuqda inuu soo jiito oo uu suurta galiyo waxqabadka fal dambiyeed, ama dhisme banaan oo inta badan aan la hubin ama aan la ilaalin ayaa dhamaantood noqon kara tusaalayaal guryaha waxyeelada leh.
Waxay kuxirantahay arinta, waxaad usheegi kartaa booliska ama Xafiiska Adeegyada Muwaadiniinta midkood. Falal dambiyeed la tuhmayo, waxaad wici kartaa booliska. Hadday xaalad degdeg ah tahay, wac 911. Haddii kale, waxaad wici kartaa khadka aan degdegga ahayn (314) 231-1212. Inta badan arrimaha kale, waad awoodaa warbixin ka xareyso CSB ama la xiriir NIS. Hoos ka eeg si aad u hesho macluumaadka xiriirka ee NIS.
Had iyo jeer sheeg cinwaanka!
Aad ayey muhiim u tahay markaad ka warbixineyso nashaadaadka rabshadaha socda inaad sheegto cinwaanka guriga ay dhibaatadu ka jirto markasta oo ay suurtagal tahay. Si loo dhiso kiis ka dhan ah hantida dhibaatada, booliisku wuxuu ku baaqayaa adeeg iyo codsiyada adeegga CSB waxay u baahan yihiin in lagu soo wargeliyo cinwaanka saxda ah.
Ogaanshaha cinwaanka gaarka ah ee guryaha dhibka kajira ee xaafadaada waxay hubineysaa in dhammaan cabashooyinka la xaqiijiyay ay kujiraan guriga saxda ah waxayna ka caawineysaa booliska iyo wakaaladaha kale ee magaalada inay baaraan arrimaha. Marna ha siinin cinwaan u gaar ah marka aad booliska ama CSB u yeeraysid si aad u diiwaangeliso cabasho ku saabsan hanti kale.
Ka raadi NIS-kaaga Ward
Qeybaha magaalada kasta waxay leeyihiin NIS loo xilsaaray. Haddii aadan hubin qaybta aad ku jirto, booqo magaalada cinwaanka iyo bogga raadinta hantida oo qor cinwaankaaga.
Khabiirka 25aad ee Khabiirka Hagaajinta Xaafadaha
Christian Saller waa NIS-ka xaafadda 25-aad, oo daboolaysa inta badan xaafadda Dutchtown ee saxda ah, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah Mount Pleasant iyo Carondelet. Kala xiriir Christian Saller halkan SallerC@stlouis-mo.gov ama (314) 657-1375.
Ward 9aad iyo Khabiirka 20aad ee Khabiirka Hagaajinta Xaafadaha
Barb Potts waa NIS-ka xaafadda 9-aad, oo ay ku jiraan qaybta bari ee Greater Dutchtown - qaybo ka mid ah Marine Villa iyo Mount Pleasant. Iyadu sidoo kale waa NIS ee xaafadda 20aad. Xaafadda 20-aad waxaa ku jira qaybta woqooyi ee Dutchtown, dhammaan Gravois Park, iyo qaybo ka mid ah Marine Villa. Waxaad kala xiriiri kartaa Barb Potts PottsB@stlouis-mo.gov ama (314) 657-1370.
Ward 11aad iyo Khabiirka 13aad ee Khabiirka Hagaajinta Xaafadaha
Kathryn Woodard waa NIS-ka xaafadda 11-aad iyo degmada 13-aad. Qaybta 11aad waxay dabooshaa geeska koonfur-bari ee aagga Greater Dutchtown. Qaybta 13-aad waxaa ku jira koonaha koonfur-galbeed ee Dutchtown oo u dhow Dugsiga Sare ee St. Mary. Waxaad kala xiriiri kartaa Kathryn Woodard halkan WoodardK@stlouis-mo.gov ama (314) 657-1355.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay July 3rd, 2020 .
DutchtownSTL.org Kheyraadka Xaafada Dutchtown Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha